My World: ရယ်ဒီမိတ် အစားအစာတွေနဲ့ ဟန်ချက်ညီနိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ
ရယ်ဒီမိတ် အစားအစာတွေနဲ့ ဟန်ချက်ညီနိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, August 28, 2013 Labels: အထွေထွေ
အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးတာမြန်ဆန်လွန်းသလို အချိန်နဲ့အမှီလိုက်နေရတဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေလည်း ပိုပြီးမြန်ဆန်လာနေတာပါပဲ။ အဲဒီလို ခပ်လှစ်လှစ် သွက်လက်မြန်ဆန်နေမှလည်း ဒီခေတ်မီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်ကြတော့မယ်။ ရှားပါးလာတဲ့အချိန်တွေထဲမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့မီးဖိုချောင်လေးထဲ ချက်ပြုတ်နိုင်မယ့်အချိန်တွေဟာ အနည်းဆုံးပါပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက လှုပ်လှုပ်ရှားရှား သွားသွားလာလာ အိမ်ရှင်မတွေအတွက်လည်း လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့ အသင့်သုံးအစားအစာ (Ready-made)တွေဆီလက်လှမ်းလိုက်ဖို့ပဲ အားသန်လာကြတော့တယ်။ အအေးခံထားနိုင်မယ့် အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာ၊ Freezer တွေ မပေါ်နိုင်သေးခင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွေမှာ အဲဒီလို အသင့်သုံးအစားအစာတွေဟာ လက်လှမ်းမမှီနိုင်သေးတဲ့အရာပါ။ နောက်ပိုင်း အအေးခံအစားအစာတွေ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှိလာတော့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ စီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမြင်တွေ့လာခဲ့ကြပြီပေါ့။ အဲဒါဟာ နည်းပညာတိုးတက်မှုတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေတိုးပွားလာဖို့ ဖြည့်တင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အချိန်ကိုချွေတာစုဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲ ကြော်ငြာလာခဲ့ကြပြီ။ အားလုံးအတွက်အဆင်ချောတယ်။ အလွယ်တကူပြုပြင်စားသုံးနိုင်ကြတဲ့ အရာတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ ချက်ပြုတ်ဖို့အချိန်ရှိနေနိုင်တဲ့ဇနီး၊ ခင်ပွန်း မိသားစုလေးတွေမှာတောင်မှ စိတ်အေးလက်အေး မြန်မြန်လေးပဲ ချက်ပြုတ်နိုင်တယ်။ လူလည်းသက်သာလှတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေရဲ့ ပြင်ဆင်ထုပ်ပိုးထားမှုဟာလည်း အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့ဆိုတော့ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာပဲပေါ့။ ကြော့မော့သားနားလှတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ ရယ်ဒီမိတ်အသီးအနှံထုတ်တွေမှာဆိုရင်လည်း ချိုမွမွပြောင်းဖူးစေ့ထုတ်လေးတွေ၊ ပဲသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်ချိုအနီအစိမ်း စတဲ့ အသီးအနှံမျိုးစုံပါမကျန်ရနိုင်နေတော့ Freezer ထဲ ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။ စားခါနီးမှ ချက်ပြုတ်ကာ အချိန်ရာသီမရွေးဘဲ စားသုံးနိုင်လာကြတယ်။
အသင့်စားနိုင်တဲ့ TV dinner (အအေးခံညစာ၊ အအေးခံအစားအစာ) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ chilled meal မျိုးကိုတော့ ၁၉၅၀ နှစ်တွေမှာ Swansons အမေရိကန်ကုမ္ပဏီက စတင်မိတ်ဆက်ရောင်းချလာခဲ့တယ်။ လင်ဗန်း(tray)လေးတစ်ခုထဲမှာ လူတစ်ဦး တစ်နပ်စာအတွက် အဟာရအစုံအလင် အသား- များသောအားဖြင့်တော့ အမဲသား၊ ကြက်သား (ကျေးဇူးတော်နေ့အခမ်းအနားမျိုးမှာ ကြက်ဆင်သားနဲ့ အထူးသဖြင့် ပြင်ဆင်ကြတယ်။)၊ အသီးအနှံအတွက်က ပဲစိမ်းလုံးနှပ်၊ ပြောင်းဖူး ဒါမှမဟုတ် အာလူးပြုတ်ထောင်း(mashed potato) နဲ့ တခါတရံမှာ အချိုမုန့်အဖြစ် ပန်းသီးသကြားဌာပနာမုန့်လို့ ထည့်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ထမင်းပါတဲ့ tray မျိုးလည်းရှိကြတယ်။ အဲဒီ အအေးခံ(chilled) TV dinner ကို ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အိမ်ရောက်မှ အပူပေးပြီး စားသောက်ရုံပါပဲ။ အလူမီနီယံ tray ကို အသုံးပြုထားကြပြီး oven ထဲမှာ နွှေးနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ microwave နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အသားမျိုး များသောအားဖြင့် ပလပ်စတစ်တွေနဲ့ ပြင်ဆင်လာကြတယ်။
ခဲထားတဲ့ Frozen အစားအစာတွေက အမြင်အားဖြင့် တောက်ပဝံ့ကြွားမှုမရှိတာကြောင့် အအေးခံ chilled meal တွေက ဈေးကွက်ဝင်လာခဲ့တာပါ။ mash potato ကို ready meal အဖြစ် ပြင်ဆင်ရောင်းချမှုမရှိသေးခင်မှာ ၁၉၇၉ လောက်က Marks and Spencer ကုမ္ပဏီက ရယ်ဒီမိတ် ကြက်သားကို စပြီးရောင်းချလာခဲ့ပါတယ်။ စားသုံးသူတွေက အိပ်ရာကနိုးထလိုက်တာနဲ့ သန်းဝေပြီး ရယ်ဒီမိတ်အထုထ်လေးတွေရဲ့ အရောင်အသွေးစုံစုံရုပ်ပုံလေးတွေရဲ့အလှအပဆီ အာရုံရောက်မယ်။ အထုတ်လေးကို လွယ်လွယ်ကူကူဖောက်ပြီး မနက်စာအတွက် အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်မယ်။ chilled meal ရဲ့ လန်းဆတ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့အတူ အသင့်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ chilled meal တွေရောင်းချရမှုဟာ ၈၀ ခုနှစ်တွေထဲမှာ ရောင်းအားတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်တော့ chilled meal တွေဟာလည်း ဖက်ရှင်ကျကျစားသောက်တဲ့ပုံစံထက် ကျန်းမာဖို့အတွက် အာရုံစိုက်စားသောက်ကြရမယ့်ခေတ် ဖြစ်လာပါပြီ။ ဥပမာ နေကြာဆီသုံးစွဲလာတာ၊ အသားတွေကို deep-fried ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ကြော်လာကြတာတွေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာကြတာမျိုးပေါ့။ ၉၀ ခုနှစ်ထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့ စားသောက်ပုံစံအတွက် ပါဝင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဟာရအချိန်အဆကို ကြည့်ပြီးရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြတယ်။ အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကလည်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအသေအချာ အညွှန်းတပ်ပြီးရောင်းချလာကြပါတယ်။
ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ တကယ်ပဲညီညွတ်နိုင်ပြီလား။ မိသားစုအစားအစာဖြစ်ပြီလားဆိုရင်
“ရယ်ဒီအစားအစာတွေနဲ့ ပြဿနာကတော့ ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တာပါပဲ၊ အချိန်အဆအတိအကျသိဖို့ခက်ပါတယ်” လို့ British Nutrition Foundation က ဆာရာစတန်နာကပြောပါတယ်။ pasta ခေါက်ဆွဲနှစ်ပွဲကိုပဲကြည့်ပါဦး။ အပြင်ပမ်းအမြင်အရတော့ ထုပ်ပိုးထားပုံကြည့်ပြီး အတူတူလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဟာရပါဝင်မှု အချိုးအဆကတော့ အလွန်ကွဲပြားပါတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ရယ်ဒီအစားအစာတွေက ရှင်တို့အတွက် ဆိုးတာပေါ့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ “healthy” “low fat” “diet” စာတမ်းတွေပါတဲ့ ရယ်ဒီအစားအစာတွေက သာမန်ဘာမှဖော်ပြမထားတဲ့အမျိုးအစားထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တာအမှန်ပါပဲ။ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့အတွက်တော့ မေးခွန်းမေးရဦးမှာပါ။ ကိုယ်တို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ရယ်ဒီအစားအစာအတွက်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို အဓိကအချက်လေးတွေ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
၁. ဆားပါဝင်မှုပမာဏ နည်းတာ (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆားဟာ သွေးတိုးရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ပါ)
၂. ပြည့်ဝဆီပါဝမှုပမာဏ နည်းတာ (အဆီပေါများတဲ့အသားမှာပါတဲ့အဆီမျိုး၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ အုန်းဆီ၊ စားအုန်းဆီတွေဟာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောမြင့်တက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတယ် LDL ကိုလက်စထရောမြင့်တက်စေတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ၊ အဝလွန်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေ - ဆီးချိုလိုရောဂါမျိုး ရလာဒ်ရှိလာနိုင်တယ်။)
၃. သကြားပါဝင်မှုပမာဏ နည်းတာ ( သွားကျန်းမာရေးအတွက်ပါ)
၄. ဗီတာမင် နဲ့ သတ္ထုဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏမြင့်မားတာ (ဗီတာမင်၊ သတ္ထုဓာတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာမျိုးရွေးချယ်ဖို့ပါ။ ကျန်းမာတဲ့အရိုး၊ အရေပြား၊ ဆံပင် နဲ့ အစာခြေစနစ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။)
အညွှန်းစာရွက်လေးကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့နီးနိုင်သမျှဆွဲယူပြီး ကြည့်တာဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပါ။ ရေးထားတဲ့အညွှန်းတွေက နားရှုပ်စရာပညာရပ်အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြစ်နေတာတောင်မှ နားလည်ထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဥပမာ-သကြားဆိုရင် glucose, maltose, dextrose နဲ့ sucrose ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာမျိုးပါ။ ဆားဆိုရင်တော့ ‘sodium’ လို့ ရေးကြပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းကို အလေးချိန် အများကနေ အနည်းအစီအစဉ်နဲ့ အညွှန်းရေးလေ့ရှိကြတယ်။ အဟာရဓာတ်အညွှန်းအတွက် များသောအားဖြင့် table လေးနဲ့ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ table အကွက်ထဲမှာ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတိန်း၊ အဆီ နဲ့ ဆိုဒီယမ်ဆိုပြီးရေးထားကြတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းလမ်းညွှန်ချက်တွေမှာ အစားအစာထုပ်ပိုးမှုအတွက် လိုက်နာသင့်တာတွေရှိတယ်။ Low fat ဆိုရင် ဥပမာ ဘယ်လောက်အထိလျော့နည်းစေသင့်တာလဲ၊ အစားအစာအစိုင်အခဲဆိုရင် fat ၃ ဂရမ် မပိုဘဲပါသင့်တယ်။ အရည်အတွက်ဆိုရင် ၁၀၀ မီလီလီတာထက်မပိုဘဲပါသင့်တယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပါ။ ‘reduced fat’ ဒါမှမဟုတ် ‘light’ နဲ့ ရောထွေးစိတ်ရှုပ်မသွားပါနဲ့။ ‘sugar-free’ ဟင်းလျာလို့ ရေးထားရင် သကြားထည့်မထားဘူးလို့ဆိုပေမယ့် သဘာဝသကြားဓာတ်ပါရှိနေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်တောင် ဖန်တီးထားတဲ့ဆေးသကြားလို ချို တဲ့အရာ ပါဝင်နေနိုင်သေးတယ်။ အကုန်လုံးသဘာဝအတိုင်းဆိုတာမျိုးက ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အဓိပ္ပါယ်မရှိလှဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုတယ်။
diet လုပ်နေသူတွေအတွက် ရယ်ဒီအစားအစာတွေဟာပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတာကလည်း သူတို့မှာပါဝင်နေတဲ့ ကယ်လိုရီအားလုံးကို အညွှန်းနဲ့တိတိကျကျဖော်ပြထားကြလို့ပါ။ တစ်ယောက်စာအထုတ်အရွယ်အစားကလည်းသေးငယ်တယ်။ အဲဒီတော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ပြီးလှဲလှယ်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ အဟာရဗေဒပညာရှင်တွေ စိတ်ပူတာက ရယ်ဒီအသင့်ပြင်အစားအစာထဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဒါမှမဟုတ် ဆလတ်အရွက်/ ဆလတ်သုပ် ဘယ်လောက် ပေါင်းထည့်စားနေကြမလဲဆိုတာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဆလတ်မျိုးသေချာစေဖို့ ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ freezer ထဲ အေးခဲထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲ တစ်ပတ်လောက်လဲလျောင်းနေခဲ့တဲ့အသီးအရွက်ထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်/ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ အချိုတည်းစရာကိုလည်း meal တစ်ခုအပြီးစားပေးပါတဲ့။ လတ်ဆတ်တဲ့အသီး၊ low fat ဒိန်ချဉ် ဒါမှမဟုတ် low fat ပြင်သစ်ဒိန်ခဲ(fromage frais)မျိုးစားပေးတာဟာ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ meal တစ်ခုအဖြစ်ပြည့်စုံသွားစေနိုင်တယ်။ နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်နေကြရတာက chilled ဒါမှမဟုတ် frozen ရယ်ဒီအစားအစာ ဘယ်ဟာက ကိုယ်တို့အတွက်ကောင်းမွန်စေတာလဲဆိုပါ။ ကွဲပြားချက်မရှိလှပါဘူးတဲ့။ ရယ်ဒီအစားအစာမှာပါတဲ့ အပူပေးရမယ့်အညွှန်းအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲ။
အဲဒီအစားအစာတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ရဲ့လားဆိုတာလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ထုပ်ပိုးထားတဲ့အဲဒီလို ရယ်ဒီနေ့လည်စာအပြင် takeaway အစားအစာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာစားလာကြတာလည်း အခုဆိုပိုလို့တောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပါပြီ။ စိတ်ပူစရာက အလုပ်တွေစက္ကန့်၊ မိနစ်နဲ့အမျှအလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကလူတွေအတွက် နေလည်စာကိုဖြစ်သလိုလေးစား/ တခါတရံလုံးဝမစားဘဲ ညနေစာကျမှ အပြင်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေဟာ ဝဖြိုးစေဖို့ဦးတည်နေပါတယ်။ သိပ်ကိုဆာလောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် menu ကို အလေးပေးရွေးချယ်နေကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ စားသင့်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးစားပြစ်လိုက်ကြတော့မှာ သေချာနေပါပြီ။ ကယ်လိုရီတွေလည်း တွက်ချက်နေနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ကယ်လိုရီအချိန်အဆအလွယ်တကူမတွက်ချက်နိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင် ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေးတော့ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အသီးအရွက်တစ်ပန်းကန်ကိုရွေးပါ၊ ဟင်းအတွက်ဆိုရင် ကရင်မ်မပါတာ၊ high fat ဆော့စ်မပါတဲ့ ဟင်းလျာမျိုးကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အသားအတွက် ကြော်လှော်ထားတဲ့အမျိုးအစားမရွေးဘဲ သားငါးအကင်/ ပေါင်းထားတဲ့အသားငါး ရွေးနိုင်တယ်။ meal တစ်ခုမှာအနောက်နိုင်ငံသားတွေတွဲဖက်စားနေကြဖြစ်တဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ချိစ်၊ ထောပတ် အဲဒါတွေထည့်ပေါင်းပြီးမစားပါနဲ့။ meal မစခင် စားတဲ့အစားအစာ၊ meal ပြီးရင်စားတဲ့ အချိုပွဲမှာ အဖွင့်ရောအပိတ်ရော၊ မစားလိုက်ပါနဲ့။ တစ်ခုကို ကြိုးစားပြီးရှောင်ကြည့်ပါ။
• အာလူးကင်ကို ထောပတ်မပါဘဲမှာပါ။ low-fat အဖြည့်အစားအစာဆိုရင် ပဲသီးပေါင်း၊ မလိုင်ထုတ်ပြီးသားဒိန်ခဲအပျော့၊ တူနာငါး နဲ့ မှိုတို့ဟာ အရသာလည်းရှိလှတယ်။
• burger အတွက် ကယ်လိုရီတွေခုန်တက်သွားလောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ mayonnaise ကို မထည့်ဖို့ မှာကြည့်ပါ။ ကြက်သွန်ကင်၊ သခွားချဉ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးချတ္တနီအသားကင် ဒါမှမဟုတ် အချို/ အချဉ်ဆောစ့်နဲ့စားနိုင်ပါတယ်။
• sandwich မှာလည်း low fat ဖြည့်စွက်အစားအစာနဲ့ရွေးချယ်ပါ။ ကြက်သား နဲ့ ဆလတ်ရွက်များများရောထားတဲ့ ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့်ကိုမှာပါ။ ဂျုံကြမ်း(wholemeal)ပေါင်မုန့်ဟာ အမျှင်ဓာတ်ပေါကြွယ်ဝပါတယ်။
• အသီးဖျော်ရည် ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးရေ၊ ကျောက်စက်ရေ (ရနိုင်ရင်) တို့ဟာ ရှုးခနဲအသံပြုတတ်ကြတဲ့အချိုရည်တွေထက် ပိုပြီး လန်းဆန်းကျန်းမာစေပါတယ်။ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္ထုဓာတ်လည်းပိုမိုပါဝင်ကြတယ်။
• Fast food မှာ ငါးကြော်ဟာ အဟာရကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြက်ဥ၊ ဂျုံမှုန့်၊ နို့ရည်ရောထားတဲ့အနှစ် - batter မပါဘဲစားတာပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အဲဒီအနှစ်မျိုးက အဆီဓာတ်များပြားလှတယ်။ ကိုယ်လိုသလိုမှာယူလို့မရတဲ့ fast food ဖြစ်နေရင်တောင် မစားခင်မှာ အဲဒီ batter ကို ဖယ်ရှားပြစ်ပါ။
• ပဲစိမ်းလုံးအိအိလေးတွေလည်းမမေ့ပါနဲ့။ ပဲစိမ်းလုံးဟာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပေးနိုင်တဲ့အစားအစာပေါ့။
ကျွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ မြေထဲပင်လယ်စာ diet တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးကြီးလှတယ်တဲ့။ red meat ဝေစုနည်းနည်းပဲပါတယ်။ အသီးအရွက်နဲ့ ဆေးဘက်ဝင်သစ်သီးသစ်ဥပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ/ ဖြူ နဲ့ သံလွင်ဆီကိုအသုံးပြုတတ်ကြတာမို့ပါ။ (အိမ်မှာ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအလေ့အကျင့်လေးနဲ့စားသောက်သင့်တာပေါ့)
• Meal မစခင်မုန့်မှာ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့သံလွင်ဆီတို့ပါဝင်တဲ့ garlic bread လေးတွေချထားပေးတတ်တယ်။ အဲဒီအစား ဆလတ်ရွက်လောက်ပဲစားပါ။ ဆောစ့်မတို့မိအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။
• carbonnara ခေါက်ဆွဲမှာတော့ ကရင်မ်တွေများများပါဝင်တတ်တာကြောင့် ကြက်သား pasta ခေါက်ဆွဲမျိုးကို ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့်နဲ့ပဲမှာပါ။
• ပီဇာမုန့်ဆိုရင်လည်း အသီးအရွက်စားချင်စဖွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပီဇာဟာ ချိစ်လေးမျိုးပါ ပီဇာထက် (ကျန်းမာရေးအတွက်) ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ salami/ sausage/ pepperoni တို့လို အမဲသား ဝက်သား ကြက်အူချောင်းတွေပါတဲ့ ပီဇာမျိုးမရွေးချယ်မိတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
တရုတ်အစားအစာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ ပေါင်းထားတဲ့အစားအစာဖြစ်တတ်တာရယ်၊ အပူရှိန်ပြင်းပြင်းမှာ ဆီနည်းနည်းနဲ့ ကျော်ထားတတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒါတာ အစားအစာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်။ အဆီလည်းပါဝင်မှုနည်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ တရုတ်အစားအစာရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်
• Batter များများပါဝင်ပြီး ကြော်ထားတဲ့ ဝက်သား၊ ပုဇွန်အသားလုံးတွေကို ရှင်းလင်းပြစ်ပါ။
• ထမင်းကြော်/ ခေါက်ဆွဲကြော်ထက် ထမင်းဖြူ၊ ရိုးရိုးခေါက်ဆွဲကိုပဲ မှာပါ။ အမျှင်ဓာတ်များများ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပေါကြွယ်ဝစွာရရှိပါလိမ့်မယ်။
• တူနဲ့ စားပါ။ အဲဒါဟာ ခပ်ကြာကြာစားရတယ်။ တကယ်စားဖြစ်တဲ့ပမာဏတာထက် ပိုပြီးစားလိုက်သလိုထင်မြင်မိစေတယ်။
အိန္ဒိယအစားအစာဟာလည်း လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာဖြစ်သလို နည်းနည်းဂရုစိုက်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် အဟာရဓာတ်ပေါများကြွယ်ဝစွာရရှိတာပါပဲ။
ပေါင်မုန့်ကိုသတိထားပါတဲ့။ ပလာတာ နဲ့ ကီးမားပလာတာတွေဟာ ဆီများများနဲ့ ခပ်ကြာကြာကြော်ထားကြတာကြောင့် ဝဖြိုးစေပါတယ်။ ကီးမားပလာတာမှာဆိုရင် အသားတွေတောင်ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
ကရင်မ်၊ ဆီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ခပ်များများ korma ဟင်းအနှစ်နဲ့ ဒန်ပေါက်-(ဘီရန်နီbiryani) တို့ထက် ကင်ထားတဲ့ဟင်းလျာမျိုးကို tikkas ဟင်းအနှစ်(ဆော့စ်မပါတာ)နဲ့ စားတာပိုသင့်တော်ပါတယ်။
ဟင်းရံထဲမှာ ကြက်သွန်နီကြော်တွေဟာ ခပ်ကြာကြာ ကြွပ်နေအောင်ကြော်လှော်ထားတာမို့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေများများစားစား၊ တခါတရံအသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေပါထည့်ပြီးချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ထောပတ်ထမင်းမျိုး မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ အသွေးအရောင်များများ လှပအောင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းမျိုးတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကလေးငယ်တွေအတွက် ဖေဖေ မေမေတို့ ရွေးချယ်ပေးသင့်တာက
burger ဆိုင်မှာဆိုရင် double တို့၊ whopper အကြီးစားကြီးတွေ မရွေးချယ်မိပါစေနဲ့။ coke လို fizzy အချိုရည်မျိုးထက် သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခုခုသောက်ပါစေ။ အနည်းဆုံးတော့ ဗီတာမင် စီ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ရေတစ်ခွက်လည်း မဖြစ်မနေယူထားပေးပါ။ အချိုပွဲအတွက် အသီးအနှံ၊ ဒိန်ချဉ်ကို သောက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မှာယူလို့မရနိုင်ရင် အိမ်ကနေယူသွားပေးပါ။ အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်ဟာ အဆီဓာတ်ကို အထူးသတိထားရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
လူတစ်ဦးအတွက် နေ့စဉ်လက်ခံနိုင်တဲ့ပျှမ်းမျှမမာဏကို သိထားရင်လည်းအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အဆီ - အမျိုးသားတွေအတွက် ၉၅ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီးအတွက် ၇၀ ဂရမ်
ပြည့်ဝဆီ - အမျိုးသား - ၃၀ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီး - ၂၀ ဂရမ်
ဆိုဒီယမ် - အမျိုးသား- ၂.၅ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီး - ၂ ဂရမ်
အမျှင်ဓာတ် - အမျိုးသား - ၂၀ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီး - ၁၆ ဂရမ်
သကြားဓာတ် - အမျိုးသား - ၇၀ ဂရမ်၊ အမျိုးသမီး - ၅၀ ဂရမ် တို့ဟာ ပျှမ်းမျှစားသုံးနိုင်တဲ့ပမာဏတွေပါ။
တစ်နေ့စာအစားအသောက်အတွက် ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာ၊ အပြင်စာတွေပဲ ရွေးချယ်စားသုံးနေမိတာဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေစေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုင်တွေမှာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွား ရယ်ဒီအစားအစားတွေ၊ အိမ်မှာအလွယ်တကူချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ အရောင်အသွေးစုံစုံ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ရယ်ဒီမိတ်အထုတ်လှလှလေးတွေ အမယ်စုံအများကြီးထဲက အရသာပြည့်ဝပြီးအဟာရ ရရှိမယ့်အစားအစားမျိုး ရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေရှောင်ကြဉ်ပြီး ရှင်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ချွေတာပြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ရှင်တို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဟန်ချက်ညီသွားဖို့ပဲ လိုအပ်နေတာပါ။ ။
Ref: The rise of the ready meal By Denise Winterma
Ready meals or family meals (www.motheratwork.co.uk)